3 MA Fan Momentum Forex Ukuhweba Isu - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex 3 MA Fan Momentum Forex Ukuhweba Isu
Ukuhweba akudingeki kube nzima. Kwesinye isikhathi abathengisi bayazicindezela izinto ngaphandle kwesizathu. Ngisho namasu anzima usebenzisa izihlungi eziningi, abadayisi basazithola benemiphumela efanayo uma kuqhathaniswa nabathengisi abasebenzisa isu elilula.
Yize amasu ayinkimbinkimbi angaba nezinzuzo ezithile, amasu okwenza izinto ngokweqile nawo angaholela ekukhathaleni, okwenza abathengisi bathambekele kakhulu emaphutheni. Amasu anemishini elula ngakolunye uhlangothi avumela abathengisi ukuthi bagxile ekubhekeni ukuthi imakethe ihamba kanjani, ebavumela ukuthi bathathe amathuba amaningi okuhweba.
Amasu we-Momentum angenye yezindlela ezilula kakhulu zamasu okuhweba. Abahwebi bamane bakhombe ukuthi imakethe iyakhula yini futhi ihwebe ngayo.
3 I-MA Fan Momentum Forex Trading Strategy isu lokuhweba ngomfutho elisebenzisa izinkomba ezimbili kuphela. Lezi zinkomba zingakhomba izindawo zokubuyela emuva ezingaba nomfutho ngemuva kwazo. Uma imakethe ithola umfutho, kungahle kube nomphumela wemakethe ethrendayo eqinile.
3 Inkomba ye-MA Fan
1 3 Inkomba ye-MA Fan
2 Inkomba Yamandla Ahlobene
4.3 Indlela ukufaka 3 MA Fan Momentum Forex Ukuhweba Isu?
3 Inkomba ye-MA Fan iyinkomba yezobuchwepheshe yangokwezifiso ekhomba inkomba ejwayelekile yokuthambekela kokubhangqa kwemali.
Enye yezindlela ezivame kakhulu ukukhomba ukuqondiswa kwesitayela ukusebenzisa isethi yezilinganiso ezihambayo. Umkhuba ususelwa ekutheni izilinganiso ezihambayo zifakwa kanjani. Uma isilinganiso sokuhamba esisheshayo singaphezu kwesethi, ke imakethe ibhekwa njenge-bullish. Uma isilinganiso sokuhamba esisheshayo singaphansi kwesethi, khona-ke imakethe ibhekwa njenge-bearish.
I- 3 Inkomba ye-MA Fan isuselwa kulo mqondo. Isebenzisa izilinganiso ezintathu ezihambayo ukukhomba umkhombandlela. Ingasetshenziswa futhi ukugcina amandla wethrendi njengoba inkomba ingafundi kuphela inkomba yokuqondiswa esikhathini esibekiwe samanje, kodwa futhi ikhomba ukuqondiswa kwethrendi kwezinye izikhathi ezibekiwe. Ukuhwebelana okwenziwe ngokuqondiswa kwethrendi ekhonjiswe yizikhathi eziningi ezibekiwe kuvame ukuveza imiphumela engcono ngoba ukubhangqwa kwemali kuthiwa kuthrendela ezikhathini ezahlukene zesikhathi.
Inkomba Yamandla Ahlobene
Inkomba Yamandla Ahlobene (I-RSI) ingenye yezinkomba zobuchwepheshe ezithandwa kakhulu ngabadayisi abaningi. Kuyinkomba ehehayo engasetshenziselwa izinhloso ezahlukahlukene ngokuya ngecebo lomthengisi.
Lo oscillator uhlela umugqa ongagudla phakathi 0 uku 100. Inamaki ku- 30 futhi 70 ezisetshenziselwa ukukhomba izimo zamanani ezinde kakhulu. Imigqa engezansi 30 khombisa imakethe engathengisiwe ngenkathi imigqa engenhla 70 khombisa imakethe ethengwe ngokweqile. Abahwebi bangabe besebenzisa lolu lwazi ukuhweba ukusetha okuguqukayo.
Abanye abadayisi bazobeka omaka ezingeni 45, 50 futhi 55. Ulayini ohlala ngaphezulu 50 ngokusekelwa ku 45 ibonisa imakethe ehamba phambili ye-bullish, ngenkathi umugqa uhlala ngezansi 50 ngokumelana ku 55 ibonisa imakethe ehamba phambili ye-bearish.
Imakethe nayo ingakhonjwa ukuthi inamandla amakhulu e-bullish uma yephula kakhulu ngenhla 55, nomfutho we-bearish oqinile uma wehla ngezansi 45.
Lelisu likhiqiza amasiginali wezohwebo anomfutho ongaholela enkambisweni kusetshenziswa i- 3 Isibonisi se-MA Fan ne-RSI.
Ukuqala okungenzeka kwethrendi kukhonjwe ngokususelwa ekuphepheni kwemigqa emithathu emaphakathi ehambayo. Imigqa kufanele ifakwe emgqeni olungile ukuqinisekisa ukuqala okuvumelekile kwethrendi entsha.
Phezu kwalokhu, ukuphephetha kwe- 3 Isibonisi se-MA Fan kufanele futhi sihambisane nolayini we-RSI okhombisa umfutho oqinile. Lokhu kusho ukuthi umugqa we-RSI kufanele wephule ngenhla 55 kusethaphu esetshenziswayo, nangaphansi 45 ekusethweni kwe-bearish.
Ukuhweba bese kugcinwa uma ukuthambekela sekukhona. Lokhu kubonakala ngokuhlala kwentengo ohlangothini olufanele lwesilinganiso sokuhamba esiphakathi nendawo nolayini we-RSI ungaguquli ubheke ezingeni lokuxhaswa noma lokumelana.
3MAFan (ukulungiselelwa okuzenzakalelayo)
Othandwayo Isikhathi Ozimele: 5-umzuzu, 15-umzuzu, 30-umzuzu kanye namashadi wehora-1
Umugqa wesilinganiso wo-turquoise (isilinganiso esifushane sokuhamba) kufanele iwele ngenhla kokuluhlaza okwesibhakabhaka (phakathi nonyaka) negolide (isikhati eside) imigqa emaphakathi ehambayo.
I- 3 Imigqa emaphakathi yokuhamba kwabalandeli be-MA kufanele iqale ukuphuma ngale ndlela elandelayo:
I-crossover kufanele ihambisane nomugqa weRSI owela ngenhla 55.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho intengo ivalwa ngaphansi komugqa wesilinganiso sokuhamba okuluhlaza okwesibhakabhaka.
Vala ukuhweba ngokushesha lapho umugqa we-RSI uwela ngezansi 45.
Umugqa wesilinganiso wo-turquoise (isilinganiso esifushane sokuhamba) kufanele iwele ngaphansi kokuluhlaza okwesibhakabhaka (phakathi nonyaka) negolide (isikhati eside) imigqa emaphakathi ehambayo.
I-crossover kufanele ihambisane nokuwela komugqa we-RSI ngezansi 45.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho intengo ivalwa ngaphezu komugqa ojwayelekile ohamba okwesibhakabhaka.
Vala ukuhweba ngokushesha lapho ulayini we-RSI wephula ngenhla 55.
Amasu we-Crossover asebenzisa imigqa emithathu emaphakathi yokuhamba ngamandla okuyisisekelo noma isu lokuguqula umkhuba elisetshenziswa abathengisi abaningi. Impumelelo yokusebenzisa lolu hlobo lwecebo isuselwa ekutheni abathengisi bakhetha kanjani ukuqondiswa komkhuba.
Ukusebenzisa le nkomba kungathuthukisa kakhulu ama-setups okuhweba kusetshenziswa ama-crossovers womugqa wesilinganiso amathathu ahambayo. Lokhu kungenxa yokuthi abathengisi bangakhomba futhi inkomba ejwayelekile yokuthambekela ngokususelwa kusikhathi esibekiwe esiphakeme ngokubuka ekhoneni eliphezulu lesandla sokudla eshadini.
Lelisu futhi lisebenza kahle njengecebo lokungena ngokunemba kuzikhathi ezibekiwe eziphansi, okuqondaniswe nokusethwa kokuhweba okubekelwe isikhathi.
Uma isetshenziswe kwisimo esifanele, leli qhinga lingaveza izisetho zokuhweba ezisezingeni eliphakeme ezingakhipha inzuzo enkulu.
3 MA Fan Momentum Forex Ukuhweba Isu inhlanganisela Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
3 MA Fan Momentum Forex Trading Strategy inikeza ithuba ukuthola izici ezihlukahlukene futhi amaphethini intengo Dynamics ezingasaziwa ezingabonakali ngeso lenyama..
Indlela ukufaka 3 MA Fan Momentum Forex Ukuhweba Isu?
Thwebula 3 MA Fan Momentum Forex Ukuhweba Isu.zip
Iya kwesokudla ukukhetha 3 MA Fan Momentum Forex Ukuhweba Isu
Uzobona 3 MA Fan Momentum Forex Trading Strategy iyatholakala kwi Ishadi yakho
Isiqephu esedluleTrigger Lines Inkomba ye MT4
Isihloko esilandelayoIsikhombi se-MTF Stochastic v2.0 se-MT4
Septhemba 20, 2021
I-Target MA Indicator ye-MT4
Septhemba 19, 2021
Izinkomba ze-Forex MT54280
Amasu we Forex1080
UTim Morris - Septhemba 20, 2021 0